Kushambadzira Kunoitika Kunogona Sei Kutibatsira Kugadzirira Remangwana Risingachinji? | Martech Zone
Google munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti iri kunonoka zvirongwa zvayo zvekubvisa chechitatu-bato makuki mune iyo Chrome browser kusvika muna 2023, gore rakatevera kupfuura zvaraironga pakutanga. Nekudaro, nepo chiziviso chingaita senge nhanho yekumashure muhondo yekuvanzika kwevatengi, iyo indasitiri yakafara iri kuenderera mberi nekuenderera mberi nehurongwa hwekudzora mashandisiro emakuki echitatu-bato. Apple yakatanga shanduko kuIDFA (ID yeVashambadziri) sechikamu chekuvandudza kwayo kweIOS 14.5, iyo inoda maapplication kukumbira vashandisi kuti vape mvumo yekuunganidza uye kugovana yavo data. Uyezve, Mozilla neFirefox vatomisa rutsigiro rwechitatu-bato makuki kuteedzera vashandisi pamabhurawuza avo. Zvakangodaro, iine Chrome accounting ye dzinenge hafu yeese webhu traffic muUS, ichi chiziviso chichiri kuratidza shanduko yesismic yechitatu-bato makuki.
Izvi zvese zvinotungamira kushambadziro yepamhepo kusundidzirwa kuchinjira kune yakawanda yakavharirwa-inotungamirwa webhu, ichipa vanogumisa-vashandisi zvirinani kutonga pamusoro pe data ravo. Iyo 2022 mutsara wenguva yaigara iri yekuda zvikuru, zvichireva kuti iyi yekuwedzera nguva yakatambirwa nevashambadzi nevashambadzi, sezvo ichivapa iwo yakawanda nguva yekugadzirisa. Nekudaro, iyo shanduko yekuenda kune nyika isingabike haizove yekubva-kamwe switch, asi iri kuenderera nzira yevashambadzi avo vatove kutoenderera.
Kubvisa Kuvimba kweKuki
Mukushambadzira kwedhijitari, echitatu-bato makuki anoshandiswa zvakanyanya nekambani yeAd tech kuti vaone vashandisi pakombuta uye nharembozha nechinangwa chekunanga nekuzivisa. Zvichienderana neshanduko mukufarira kwevatengi nezvekuti data ravo rinounganidzwa kana kushandiswa sei, mabrands anozomanikidzwa kubvisa kuvimba kwavo nekuki, vachienda kune ramangwana rinosangana nemitemo mitsva yekuvanzika. Mabhizinesi munzvimbo anogona kushandisa ino nyowani semukana wekugadzirisa zvimwe zvezvisungo zvine chekuita nekuki, sekukasika-kurodha uye kushomeka kwekutonga pamusoro pemuparidzi dhata rezvikwata zvemapepanhau, kana kuki inoenderana pakati pemapuratifomu akasiyana evashambadzi.
Kupfuurirazve, kuvimba kwemakuki kwakaita kuti vashambadzi vazhinji vatarise zvakanyanya pamatanho avo ekutarisa, vachivaona vachivimba nemamirioni ekupokana uye vanogamuchira zviyero zvemashambadziro zvinoenderana nekushambadzira. Kazhinji kazhinji kwete, mamwe makambani ari muchikamu anokanganwa kuti chikonzero chaicho chekuti kushambadzira kuripo kugadzira mafungiro akanaka mune chero munhu anopindirana nechiratidzo.
Chii chinonzi Contextual Advertising?
Contextual kushambadzira kunobatsira kuona ari kutenderera mazwi akakosha uye kusvika kune vatengi kuburikidza neyakafanana-nevanhu ongororo yezviri mukati (kusanganisira zvinyorwa, vhidhiyo, uye mifananidzo), kwavo kusanganisa, uye kuiswa kuti vakwanise kuisa shambadziro inoenderana nezviri mukati uye nharaunda peji.
Yechokwadi kushambadzira 101
Contextual Ndiyo Yakanyanya Mhinduro Uye Iyo Imwe Chete Inowanikwa Pane Chiyero
Nepo magadheni ane masvingo acharamba ari sarudzo kune vanoshambadzira kuti vataurirane nevavanogona vatengi vachishandisa data-rebato rekutanga, mubvunzo mukuru ndowe chii chichaitika pawebhu yakavhurika isina makuki. Makambani ari muchikamu chedhi tech ane sarudzo mbiri: chinotsiva makuki eimwe tekinoroji inovabvumidza kuti vachengetedze kutaridzika pawebhu; kana chinja kune zvakavanzika-zvekutanga zvekutarisa sarudzo senge mamiriro ekushambadzira.
Iyo yekushambadzira indasitiri indasitiri ichiri mumazuva ekutanga ekutsanangudza mhinduro yakanakira yepasiratatu-bato cookie nyika. Dambudziko nekuki harisi tekinoroji yaro, asi kushaya kwekuvanzika. Nekunetseka kwehukama zvakanaka uye kwakadzika midzi, hapana tekinoroji inotadza kuremekedza vashandisi ichakunda. Contextual kunongedzera uchishandisa Natural mutauro Kugadziriswa (NLP) uye Artificial Intelligence (AI) algorithms haisi kungowanikwa chete uye kushanda pachikero, asi zvakare iri kuratidza kuve inoshanda sekuteerera kwevateereri.
Iko kugona kwema brand kuti unzwisise zvirimo izvo mushandisi zvaari kushandisa panguva yekushambadzira kuendesa inozove nyowani uye se-inoshanda chinongedzo chevateereri vateereri uye zvavanofarira. Kunongedzera zvinoenderana kunosanganisa kukwirana nechiyero, kunyatsoita, uye kusagadzikana izvo zvinotsigirwa nehurongwa hwenhau.
Kuvimbisa Kuvanzika kweVatengi
Panyaya yekuvanzika, yemamiriro ekushambadza mvumo yakanangwa kushambadzira munzvimbo dzakakosha kwazvo pasina kuda data kubva kune vatengi. Iyo inozvinetsa pachayo nemamiriro uye zvinoreva nzvimbo dzekushambadzira, kwete maitiro ehunhu evashandisi vepamhepo. Naizvozvo, zvinofungidzira kuti mushandisi akakodzera kushambadziro pasina kana kumbovimba nehunhu hwavo hwekare. Iine chaiyo-nguva yekuvandudza, yekambani mamiriro echinangwa anozongo zorodza kuisa matsva uye akakodzera nharaunda enzvimbo dzezviziviso, kutyaira kwakagadziriswa mhedzisiro uye shanduko.
Imwe nzira yakakosha ndeyekuti inogonesa vashambadziri kuendesa mameseji kune vatengi pavanenge vachinyanya kutambira kune mameseji emagetsi. Semuenzaniso, kana mushandisi achivhura zvemukati nezveimwe nhaurwa, zvinogona kureva kufarira kwavo kutenga zvakabatana. Pakazara, kugona kwemakambani emakambani ekushambadzira kutarisa mamiriro ezvinhu anogona kuve akakosha, kunyanya kana uchishanda mumisika yakanyanya kana niche.
Iine indasitiri yeatekinoroji munzira yekuenda kune nyika isingabike, yave nguva yekugadzirisa uye kuona kuti vatengi vanokwanisa kupa zvakavanzika zvinotungamirwa, vashandisi vekupedzisira vanoziva-vane kutonga kuri nani pane yavo data. Sezvo kunongedzera kwemamiriro ezvinhu kwakaratidza kuve kunoshanda neicho chaicho-nguva yekugadzirisa uye kuita kwako, vatengesi vazhinji vari kuzvitsvaga seimwe nzira kune yechitatu-bato makuki.
Maindasitiri mazhinji akabudirira kuchinjisa kiyi dzinojekesa uye akapedzisira ave makuru uye ane pundutso semhedzisiro. Kugadzirwa kweinternet, semuenzaniso, kwakagadzira mikana yepasirese yemasangano ekufambisa, uye avo vakagamuchira shanduko vakashanduka kubva kumakambani emuno kana emunyika kuita mabhizimusi epasirese. Vaya vakaramba shanduko, uye havana kuisa vatengi vavo pakutanga, pamwe havapo nhasi. Iyo yekushambadzira indasitiri haisi yekusara uye mabhizinesi anofanirwa kutsanangura zano ravo kumashure. Vatengi vanoda kuvanzika nenzira imwecheteyo yavanoda kunyorera mazororo avo online - kana izvi zvikapihwa ipapo mitsva, mikana inonakidza inomuka kune wese munhu.
Verenga Zvakawanda Nezve Seedtag's Contextual AI Technology
Tags: adtechkutengesa teknolojiaaichakagadzirwa njerekuvanzika kwevatengicontextual advertisingkudzayiisina kubikaCookiesyekutanga pati makukiyekutanga-patiyekutanga-pati makukiramangwana rekushambadzirakugadzirisa mutauro mutauronlpzvakavanzika